Mac လှပသော | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 26, 2007 တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 23, 2009 Douglas Karr
အကယ်၍ သင်သည်ဤအရာများကိုထည့်သွင်းမှုတစ်ခုပေါ်တွင်ဖတ်နေပါကနှိပ်ပါ ဒီမှာ ဆိုက်အားဖြင့်ရပ်တန့်နှင့်ဤဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်။ ကောင်းတယ်။
မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် After Macဗီဒီယိုမှ ခရစ္စ.
Big Programming စကားလုံးများသို့မဟုတ် Phrases
Matt B က
ဇန်နဝါရီလ 27 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 1 နာရီ 28 မိနစ်
ဤဗီဒီယိုသည် Google Reader တွင် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။ 🙂
1:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 26
အခုပဲ Google Reader က မာလ်တီမီဒီယာကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်။
1:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 9, 06
ဟေး! The After Mac ကို လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Christine ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို 🙂
1:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 27
, Juan မင်္ဂလာပါ
အဲဒါက အရမ်းကောင်းတာပဲ! Christine သည် Apple hardware ကိုကြည့်သောအခါတွင် ကျွန်တော်မြင်ဖူးသမျှ ပထမဆုံးသော အမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ 🙂